QASDIGA – Isuroon Somali
Isuroon 2017 Gala
NAGU SOO XIRAN
Deeq sii Isuroon
Home / QASDIGA
Isuroon waa urur u go’oomay dhisida haweenka iyo gabdhaha Soomaalida ah bulsho ku xirnaantooda iyo isku filnaanshahooda si kolkaa ay halkan Minnesota iyo caalamkaba ugu gaaraan nolol caafimaad, hor kac iyo wax tarba leh.
Isuroon waxa ay ku hamidaa nolol caafimaad, ku xirnaan ummada ah iyo awood siinba leh oo ay gaaraan haweenka iyo gabdhaha Soomaalida ahi si kolkaa ay iyaga iyo qoysaskooduba ay ugu bulaalaan Minnesota iyo dunida kaleba.
Aragtidayada, haweenka iyo gabdhaha Soomaalida ah iyo qoysaskoodu waa:
Dejin qorshe looga baxayo saboolnimada iyo gaarida heer isku filnaansho dhaqaale ah
Dhisida iyo isku xirka dhaqamada dadyowga kala duwan,
Garashada iyo wax ka qabadka wixii dhaqan ahaan ama qaab ahaan carqalad ku ah hor u kaca, iyo
Sugida la sugayo in la kordhiyo helitaanada daryeelada caafimaad ee ka hor taga ah.
6 dan waxyaabood ee soo socda ee ayaa xudun u ah hawgaladayada saameeyana hab dhaqanada iyo magaca bulshada Isuroon ku dhex leedahay oo ah in ay tahay urur si taabo gal ah ugu adeega haweenka Soomaalida:
La shaqeynta, beesha Soomaalida, deeq bixiyeyaasha, iskaashatadaya iyo mas’uuliyiinta.
Ku dhaqmid hufnaan ah sida aan u maamulno anagu naftayada iyo hawshayada, urur ahaan.
Muujin taxadar fiican oo ku saabsan dhowrida danta, maslaxadaha iyo mudnaanaha beesha
Dhisida is-aaminiddhex marta, beesha Soomaalida ah, haweenka iyo gabdhaha aan u adeegno.
Taakuleyn ku salaysan Caafimaadka, dhaqanka, iyo hab aqoon siin ah oo qadariya, taariikhda iyo qaayaha beesha Soomaalida ah.
Isticmaalka xirfadaha hogaaminta si loo gacan qabto loonana wadaago aqoon beesha Soomaalida ah iyo cidii kale ee dooni.
Isuroon waa urur beeshu leedahay oo haween hogaamiyo oo ka shaqeeya maslaxada haweenka kana duula aaminsanaanta ah in haweenka iyo gabdhaha Soomaalida ahi ay u qalmaanhelid caafimaad iyo cod buuxa.
Copyright All Rights Reserved © 2017 | Powered by Deep Solution